Shirkii sanadlaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo qabsoomay iyo qodobo muhiim ah oo ka soo baxay+SAWIRRO – Gool FM
(Muqdisho) 31 Dis 2017.Shirkii sanadlaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa maanta ka qabsoomay Liido Sea Food ee magaalada Muqdisho.
Shirka ayaa waxaa ka soo qeyb galay Xubnaha xiriirka kubada cagta oo ka kooban 25-ka koox ee u diiwaan gashan xiriirka kubadda cagta, sadexda urur ee kala ah macalimiinta,garsoorka iyo ururka danaha ciyaartooyda waxaana wehliya guddiga fullinta xiriirka kubadda cagta.
Sidoo kale waxaa goobta ku sugnaa guddoomiyaha guddiga Olombikada Soomaaliyeed ee Gos Mudane Tarabi, waxaana Shirweynaha furay wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo Isboortiga dalka Axmed Isloow.
Congress-ka ayaa lagu soo bandhigay wax yaabihii u qabsoomay xiriirka iyo qorshooyinka sanadka ee 2018-ka.
C/qani Saciid Carab oo ah guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa Shir jaraa’id uu qabtay waxa uu ugu war bixiyay qodobadii ka soo baxay Congress-kii sanadlaha ee maanta qabsoomay.
1: Horyaalka Soomaaliya ayaa waxaa magac ahaan loogu yeeri doonaa Somalia Premier League, waxaana maal gallin doono Premier Panka.
2: Shanta kooxood ee ugu sareeya horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya waxaa loo qaban doonaa tartan is wada arag ah ka soo loogu magac daray Star League, iyadoo kooxdii ku guuleysataa la siin doono lacag dhan shan kun oo doolar.
3: Tartan loogu magac daray National League ayaa loo qaban doonaa kooxhii soo qaada horyaalada maamul goboleedyada oo intooda badan la hir galiyay.
4:In horyaalka heerka labaad magac ahaan loogu yeeri doono Division 1.
5: In la qaban doono horyaalka heerka afaraad.
6: Kooxaha ka qeyb qaadanaya Somalia Premier League waxaa sidoo kale loo qaban doonaa tartan juunyar ah.
7:In kooxaha laga caawin doono in loo qalabeeyo xafiisyadooda.
Sikastaba waxaa shahaado sharaf la guddoonsiiyay 25-ka kooxood ee u diiwaan gashan xiriirka kubadda cagta iyo sidoo kale sadexda urur ee kala ah macalimiinta,garsoorka iyo ururka danaha ciyaartooyda.
Guardiola oo ka hadlay dhaawacyada Gabriel Jesus iyo Kevin De Bruyne